BitBar စျေး - အွန်လိုင်း BTB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitBar (BTB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitBar (BTB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitBar ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $227 667.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitBar တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitBar များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitBarBTB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$2.43BitBarBTB သို့ ယူရိုEUR€2.06BitBarBTB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.86BitBarBTB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.2.22BitBarBTB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr22.04BitBarBTB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.15.37BitBarBTB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč54.31BitBarBTB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł9.11BitBarBTB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$3.25BitBarBTB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$3.4BitBarBTB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$54.47BitBarBTB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$18.84BitBarBTB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$13.21BitBarBTB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹182.31BitBarBTB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.410.03BitBarBTB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$3.34BitBarBTB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$3.69BitBarBTB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿75.87BitBarBTB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥16.94BitBarBTB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥257.45BitBarBTB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2890.57BitBarBTB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦933.57BitBarBTB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽179.18BitBarBTB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴67.39
BitBarBTB သို့ BitcoinBTC0.000208 BitBarBTB သို့ EthereumETH0.00626 BitBarBTB သို့ LitecoinLTC0.0428 BitBarBTB သို့ DigitalCashDASH0.0248 BitBarBTB သို့ MoneroXMR0.0261 BitBarBTB သို့ NxtNXT177.9 BitBarBTB သို့ Ethereum ClassicETC0.352 BitBarBTB သို့ DogecoinDOGE717.74 BitBarBTB သို့ ZCashZEC0.0264 BitBarBTB သို့ BitsharesBTS93.34 BitBarBTB သို့ DigiByteDGB83.52 BitBarBTB သို့ RippleXRP8.44 BitBarBTB သို့ BitcoinDarkBTCD0.0829 BitBarBTB သို့ PeerCoinPPC7.93 BitBarBTB သို့ CraigsCoinCRAIG1095.58 BitBarBTB သို့ BitstakeXBS102.55 BitBarBTB သို့ PayCoinXPY41.98 BitBarBTB သို့ ProsperCoinPRC301.65 BitBarBTB သို့ YbCoinYBC0.00129 BitBarBTB သို့ DarkKushDANK770.98 BitBarBTB သို့ GiveCoinGIVE5204.01 BitBarBTB သို့ KoboCoinKOBO546.48 BitBarBTB သို့ DarkTokenDT2.24 BitBarBTB သို့ CETUS CoinCETI6938.11
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 23:05:02 +0000.